Maguire oo la shaaciyay xilliga uu garoomada dib ugu soo laaban doono… (Miyuu ka qeyb gali doonaa tartanka EURO 2020?) - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
June 11, 2021 at 09:35 Maguire oo la shaaciyay xilliga uu garoomada dib ugu soo laaban doono… (Miyuu ka qeyb gali doonaa tartanka EURO 2020?)2021-06-11T09:35:45+02:00 CAYAARAHA
(England) 11 Juun 2021. Xulka qaranka England ayaa isku diyaarinaya Koobka Qaramada Yurub ee EURO 2020, Gareth Southgate wuxuu ka war helay taariikhda uu soo laaban doono Harry Maguire.
Sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska “The Sun” ee dalka England Harry Maguire ayaa seegi doona labada kulan ee ugu horeeya tartanka Qaramada Yurub ee heerka Group-yada, laakiin wuxuu awoodi doonaa inuu ciyaaro kulanka saddexaad.
Warbixinta ayaa xaqiijisay in Maguire uusan ka qeyb gali doonin kulanka furitaanka oo ay kula ciyaarayaan Croatia garoonka Wembley Axada, iyo sidoo kale kulanka ay la ciyaarayaan Scotland shan maalmood kaddib.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan haddii uusan la kulmin wax dib u dhac ah inuu awood u yeelan doono inuu ka qeyb galo kulanka seddexaad oo ay la ciyaarayaan Czech Republic 22 June.
Dhankiisa, Halyeeyga kooxda Manchester United Rio Ferdinand ayaa dhaleeceeyay go’aanka Southgate uu ugu soo daray Maguire liiska xiddigaha xulka maadaama uu dhaawacmay, wuxuuna carabka ku adkeeyay in Saddexda Libaax aysan ka faa’iideysan doonin laacib aan 100% diyaar ahayn.
Taageerayaasha England ayaa rajeynaya in jiilkan ciyaartooyda ah ay ku guuleysan doonaan inay gaaraan wixii jiilalkii hore ay sameyn waayeen, maadaama tartankii ugu dambeeyay oo ay ku guuleystaan ​​England uu ahaa Koobkii Adduunka ee 1966-kii.
« “Benzema wuxuu noo suurtogalin doonaa ku guuleysiga koobka EURO 2020” – Halyeey reer France ah
In Tigray, food is often a weapon of war as famine looms »